Rose of Sharon: January 2013
မျက်ရည်စများကိုသုတ်လျှက် နောက်သို့လှည့်မကြည့်မိအောင် ကြိုးစားရင်း လမ်းကိုလျှောက်နေမိသည်…
ကတ္တရာလမ်းတို့က မျက်ရည်ပူတွေဝေဝါးနေသော အမြင်မှာ တိမ်လွှာတွေအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသလိုလို…
ဘယ်ကိုလျှောက်ရမှန်းမသိ ဆက်လျှောက်နေရင်းက ကော်ဖီဆိုင်တခုမှာထိုင်ရင်း စိတ်တွေတည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစားဘို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်…
လွတ်နေသည့်စားပွဲမှာဝင်ထိုင်ပြီး စားပွဲထိုးလေးလာပေးသည့်မီနူးထဲက တခုကိုလက်ထောက်ပြမိရင်း စိတ်တွေကို ပြန်လည်စုစည်းဘို့ကြိုးစားသည်…
ကြိုးစားမိကာမှ မျက်ရည်ပူများက ပါးပြင်ပေါ်သို့အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာလှိမ့်ဆင်းလာကြသည်…
ထိုနေရာကို ကျမ မသွားခဲ့မိရင် သိပ်ကောင်းမှာ… ခုတော့ မမြင်ချင်ဆုံးသောမြင်ကွင်းတခုကို ကျမမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်… ကျမလေးစားစွာချစ်မြတ်နိုးခဲ့သောချစ်ခင်ပွန်းက ကောင်မလေးငယ်ငယ်တယောက်ကို ရတနာဆိုင်ထဲမှာ လက်စွပ်လေးစွပ်ပေးနေသည့်မြင်ကွင်းက ထပ်ခါထပ်ခါ ပေါ်လာသည်…
တိုက်ဆိုင်တာလား… တစုံတယောက်က ကျမကိုဒီမြင်ကွင်းမြင်စေချင်လို့ ကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့လေသလား…
ကျမရဲ့တချို့သောမွေးနေ့တွေမှာ ခင်ပွန်းသည်က မွေးနေ့လက်ဆောင်ဝယ်ပေးလေ့ရှိသောဆိုင်ဖြစ်သည်…
ဒီနှစ်မှ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် စိန်လက်စွပ်နှစ်ကွင်း ကိုအပ်ခဲ့သည်… အပ်သည့်နေ့က ဆိုင်ရှင်ရှိမနေဘဲ ဆိုင်ဝန်ထမ်းလေးနှင့်သာတွေ့ခဲ့ပြီး ဘောင်ချာမှာရေးထားသော ရက်မှာ ကျမထိုဆိုင်သို့ လက်စွပ်ရွေးရန်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်…
ထိုဆိုင်သည် ရှော့ပင်းစင်တာကြီင်္းတခု၏မြေညီထပ်တွင်ရှိရာ ကျမထိုဆိုင်ရှေ့သို့မရောက်ခင်မှာပင် ဆိုင်ထဲမှာစုံတွဲတတွဲရှိနေတာ မြင်နေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်…
ဆိုင်ရှေ့အရောက်မှာတော့ ကောင်မလေးကို လက်စွပ်စွပ်ပေးနေသော အမျိုးသား၏ဘေးတိုက်မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရသောအခါ ကျမခြေလှမ်းတွေရပ်တန့်သွားခဲ့သည်…
တကယ်ကဒီအချိန်သူရုံးခန်းမှာရှိနေရမှာ… ကောင်မလေးက ခြေဖျားလေးထောက်ပြီး
ကျေးဇူးတင်အနမ်းလေးလှမ်းပေးလိုက်ချိန်မှာ မတ်တပ်ရပ်ကြည့်နေမိသော ကျမခြေထောက်များ ညွတ်ခွေသွားတော့သည်…
လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦး အနားရောက်လာပြီး ကျမကိုထူမပေးချိန်မှာ ဝိုင်းကြည့်နေကြသော မျက်ဝန်းများကို ရှက်ရွံ့ကာ ကျမပြေးထွက်လာမိသည်…
ခုတော့ ဆိုင်ထဲမှာ ထိုင်ငိုနေမိတာ အချိန်အတော်ကြာသွားပြီလားမသိ… ဘယ်အချိန်ကလာချထားမှန်းမသိလိုက်သော ကော်ဖီခွက်တခွက်က စားပွဲပေါ်မှာငြိမ်သက်စွာ….
သူကျမကိုတွေ့သွားလား မတွေ့သွားလား ကျမ မသိလိုက်ပါ…
အိမ်ပြန်ရောက်ရင် သူ့ကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ပြီး ဘယ်လိုစကား စပြောရမလဲ ကျမစဉ်းစားမရ…
ငဲ့ညှာစရာ ကျမတို့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေးသာမရှိခဲ့ရင် ကျမဘာမှစဉ်းစားစရာမလို… ခုတော့ သမီးလေးအတွက်ထည့်စဉ်းစားရမည်…
ကတောက်ကဆဖြစ်ချိန်တိုင်းမှာ သမီးလေးကိုပေးမသိစေချင်သည့်သူက ဒီကိစ္စမှာလဲ သမီးလေးကို ပိုလို့တောင်အသိပေးချင်မှာမဟုတ်တာသေချာသည်…
ကျမကတော့ အရွယ်ရောက်စပြုပြီဖြစ်သော သမီးလေးအား အရာရာတိုင်ပင်နေကျမို့ ပြောကိုပြောပြမှာဖြစ်သည်… သို့သော် သမီးလေးကိုတော့ မနာကျင်စေလိုပါ…သမီးလေးက ဒယ်ဒီကဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲဟုမေးလာလျှင် အဖြေရှိအောင် ကျမအရင်စဉ်းစားရပါမည်….
ဒါဆို သူဖောက်ပြန်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကို ကျမက အရင်စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်… ဘာဖြစ်လို့များပါလိမ့်…
တကယ်ဆိုကျမက ကျမရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကို ဒီသမီးနှင့်ဒီခင်ပွန်းအတွက်သာ ပေးဆပ်နေခဲ့သူဖြစ်သည်… ခင်ပွန်းအလိုကျ မိမိရဲ့အရည်အချင်း အလုပ်အကိုင်တွေကို စွန့်ပစ်ပြီး အိမ်ထောင်ရှင်မအဖြစ် လိုလေသေးမရှိအောင် ပေးဆပ်နေခဲ့သူဖြစ်သည်… ခင်ပွန်းအတွက် ဇနီးကောင်း သမီးလေးအတွက် မိခင်ကောင်းအဖြစ် ရပ်တည်ရင်းသာ ဘဝကိုကျေနပ်နေခဲ့သူဖြစ်သည်…
လွန်ခဲ့သောသုံးလေးလခန့်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ခင်ပွန်းသည်ကိုကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့်တွေ့လိုက်ကြောင်းဖုန်းနဲ့လှမ်းပြောတော့ ကျမနည်းနည်းလေးမှမယုံကြည်ခဲ့…. အခါတိုင်းလည်း အလုပ်သဘောအရ ဧည့်သည်တွေနဲ့ နေ့လည်စာစားတတ်သူမို့ သံသယမဝင်ခဲ့ပါ… ပြောသံတွေကြားရဖန်များလို့ မေးကြည့်တော့ အသိမိတ်ဆွေတွေပါဟုသာပြန်ပြောလျှက် စကားလမ်းကြောင်းလွှဲသွားခဲ့သည်…
ကျမဘဝမှာ ခင်ပွန်းနှင့်သမီးကိုသာ အလေးထားသလို သူသည်လည်းဇနီးနှင့်သမီးကိုသာအလေးထားမည်ဟု ကိုယ့်စိတ်နှင့်နှိုင်းကာ ယုံကြည်ခဲ့မိသည်…
ခုတော့ထိုယုံကြည်ချက်များတဒင်္ဂအတွင်းများ ပျောက်ပျက်သွားခဲ့လေပြီ… အိမ်ပြန်ရောက်တာနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မေးမြန်းပြောဆိုရတော့မည်… သူ့ဘက်ကပေးမည့်ဆင်ခြေတွေကို သည်းခံနားထောင်ရင်း မယုံကြည်ဖို့ကိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်အထူးသတိပေးစရာမလိုတော့…
သမီးလေးကိုမနာကျင်စေချင်မဲ့ အဖြစ်မှန်တွေကိုတော့ သမီးလေးကိုသိစေချင်ပါသည်… မိသားစုပြသနာကို သမီးလေးက ပတ်ဝန်းကျင်ပြောမှသိရလျှင် ပိုပြီးနာကျင်ရပါလိမ့်မည်…
သူ့ကိုရင်ဆိုင်ဘို့ တည်ငြိမ်လောက်ပြီဟု ယူဆမိချိန် နာရီကြည့်မိတော့ အချိန်ကြာကြာထိုင်နေမိကြောင်း သတိပြုမိသည်… ကော်ဖီခွက်ထဲကကော်ဖီရည်များလည်း အတော်ကိုအေးစက်နေခဲ့ပြီ…
ကော်ဖီတန်ဘိုးထက်အနည်းငယ်ပိုမည်ဖြစ်သော ငွေစက္ကူကို ကော်ဖီခွက်အောက်ထားခဲ့ပြီး ဆိုင်မှထွက်လာခဲ့သည်… ကျန်နေခဲ့သောကော်ဖီရည်များနှင့်ထပ်တူ ကျမနှလုံးသားက အေးစက်လျှက်
Posted by rose of sharon at 9:09 AM 15 comments: Links to this post
၂၀၁၂ကုန်လို့ ၂၀၁၃ ဝင်ရင် နှစ်ဟောင်းကိုစမြုံ့ပြန်ပြီး နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုတဲ့ပို့စ်လေးတပုဒ်လောက်ရေးမယ်စိတ်ကူးထားပေမဲ့ စိတ်ကူးသလိုမရေးဖြစ်ပါဘူး…
ဇန်နဝါရီ၃ရက်နေ့မှာ မလေးရှားကပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်… ကွာလာလမ်ပူမှာ အသွားသုံးရက် မပြန်ခင်၃ရက် ကျွန်းပေါ်မှာ၆ရက် စုစုပေါင်း၁၂ရက် အလည်သွားခဲ့ပါတယ်… ဧည့်ဝတ်ကျေတဲ့မလေးရှားကဘလော့ဂါမောင်နှမတွေကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်…
မလေးရှားကပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း ဖေဖော်ဝါရီ ရန်ကုန်ပြန်ဘို့ထပ်လှုပ်ရှားရပါတယ်…
ဖေဖော်ဝါရီ၁၀ရက်နေ့ တီတင့်အိမ်မှာ မုန့်ဟင်းခါးစားရင်း ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေ ဆုံကြရမှာကို တွေးပြီးကြိုတင်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်….
ဖိတ်ကျွေးမဲ့သူတွေတော့ ကျွေးချင်တာကျွေးကြပါစေလေ :D
စာရင်းအရတနေ့ကိုနည်းနည်းစီ ကျန်သွားတာမရှိရလေအောင် စုံအောင်စားမှာပါ….
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝယ်စားမှာပါ… ဖိတ်ကျွေးမဲ့သူတွေကိုယ့်စာရင်းဖတ်ပြီး စေတနာပျက်သွားမှာစိုးပါတယ်…
တကယ်တော့စားချင်တာတွေကျန်ပါသေးတယ်... ပြန်ရမဲ့ရက်က ၁၂ရက်ထဲမို့ ဒီလောက်နဲ့ဘဲရပ်လိုက်ပါတယ်...
ဖိတ်ကျွေးမယ်ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... ဒီစာရင်းထဲကနေ ၂မျိုး သုံးမျိုးလောက်ဘဲချက်ကျွေးရင်ရပါတယ်နော် :P .. ကျန်တာတွေတချို့က သွားရင်းလာရင်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆိုင်မှာဝယ်စားမှာပါ....
Posted by rose of sharon at 1:50 PM 26 comments: Links to this post